★မြန်မာ့အလင်း★: May 20 ရက်နေ့မှာ ပါးစပ်နဲ့မဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ကျကျ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်ဖြစ်ပါစေ
May 20 ရက်နေ့မှာ ပါးစပ်နဲ့မဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ကျကျ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်ဖြစ်ပါစေ
May 20 ရက်နေ့သည် မိုဟာမက်ပုံကို ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် လူသားတို့၏အခွင့်အရေးကို ထုတ်ဖေါ်မည့်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြင့် လူသားတို့၏ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကို ထိမ်းချုပ်၍ မရနိုင်ကြောင်းပြသမည့်. . . . လူသားရဲ့ ဦးဏှောက်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့နေ့ပါပဲ။
မွတ်ဆလင်ဆိုတာဘာလဲ? မွတ်ဆလင်တွေ ကန်တော့နေတဲ့ Meccaက အမဲလေးထောင့်တုံးကြီးဟာ Pagan တွေရဲ့ ဘာသာရေး အဆောက်အဦးပါ။ Allah ဆိုတာလဲ သူများရဲ့ နတ်ဘုရားကြီးပါ။ သူများနတ်ကြီးကို ခိုးယူပြီး သူတို့ ဘုရားလုပ်ထားတာပါ။ Quran ကျမ်းကလည်း ခရစ်ယာန်၊ ဂျူးတွေရဲ့ကျမ်းစာတွေကို ခိုးကူးထားပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ဆိုတာ ခိုးရာပါပစ္စည်း.. ခိုးရာပါအယူဝါဒ.. စတဲ့ ခိုးရာပါပစ္စည်းတွေနဲ့ စုစပ်ပြီး လုပ်ထားတဲ့ ၀ါဒသာဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားစရာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ သူတို့ခေါင်းဆောင် မိုဟာမက်ကြီးကိုယ်တိုင် သူများတွေ ကိုးကွယ်တဲ့ နတ်ရုပ်တွေကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ သူများတွေရဲ့ ဘာသာရေးအဆောက်အဦးကိုလည်း တိုက်ခိုက် ပြီး ပလီဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ သားရဲ့ မိန်းမကို ကြာကူလီရိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးကို …. ချေးစားတဲ့ ခွေးတောင်မလုပ်ပေမယ့်.. မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ တမန်တော် မိုဟာမက်ကြီးက လုပ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ မိုဟာမက်ဟာ အောက်တန်းကျဆုံး လူဖြစ်သလိုပဲ… တခြားဘာသာတွေကို စော်ကားဆုံးသူလဲဖြစ်ပါတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေကလဲ . . သမိုင်းကနေ.. ဒီနေ့အထိ မြတ်ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်တွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဆူးလေဘုရားရဲ့မြေကိုလည်း လုယူပြီးတော့ ပလီဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာမိန်းခလေးတွေကို ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ ကုလားတွေကို ပလီကနေ ဆုငွေပေးပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်ပါဘူး. . .ခရစ်ယာန်.. ဟိန္ဒူ.. ဂျူး .. တွေအပေါ်မှာလည်း သတ်ဖြတ်မှု . . . ရက်စက်မှု.. ဘာသာရေးစော်ကားမှုများစွာ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆူးလေဘုရားမြေကို လုယူသလိုမျိုး. . . ခရစ်ယာန်.. ဂျူး.. ဟိန္ဒူတွေရဲ့ ဘာသာရေးမြေတွေနဲ့ အဆောက်အဦးတွေကို လုယူပြီးတော့ ပလီတွေဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲလို . . . သမိုင်းမှ ဒီနေ့အထိ မတရားတဲ့ လုပ်ရပ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရေးစော်ကားတယ်… ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းလုပ်တယ် . . . နအဖလူတွေ . . စတဲ့ စကားလုံးတွေဟာ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ယုတ်မာမှုကို မထုတ်ဖေါ်ရဲအောင် တားဆီးရာမှာ အင်မတန်အစွမ်းထက် လှပါတယ်။ ဓါးကျိန်း ကျိန်းတာလဲ ကြောက်တတ်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာ များစွာထိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကြောင့် မွတ်ဆလင်ဝါဒဆိုးကြီးဟာ ဘာသာရေးဆိုပြီး ဆက်လက်သတ်မှတ်ခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒင်းတို့မှာ ကိုယ်ချင်းစာနာတဲ့ စိတ်ထားလုံးဝမရှိပါဘူး။ မွတ်ဆလင်တွေ ဘယ်လောက်အထိ မျှတမှုကင်းမဲ့လည်းဆိုရင် . . သူများဘာသာတွေကို အမျိုးမျိုးစော်ကားဖျက်ဆီးနေပေမယ့် . . . မိုဟာမက်ကို ကာတွန်းလေးဆွဲတာတောင် သည်းခံနိုင်စွမ်းမရှိပဲ . . ဒေါသတွေပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ သတ်မယ် ခေါင်းဖြတ်မယ်ဆိုပြီး ချိမ်းခြောက်ပါတယ်။ မနေ့တနေ့က South Park ကာတွန်းမှာ မိုဟာမက် ကို ၀က်ဝံမျက်နှာဖုံးထဲထည့်ပြီး ပြသရမလားဆိုပြီး ဒင်းတို့က ဒေါသတွေဖြစ်နေပါတယ်။.. (ဗီဒီယို သတင်း)။ အဲဒါလည်း သတ်မယ်ဆိုပြီး ချိမ်းခြောက်ပါတယ်။
ဒီခေတ်ကြီးမှာ အဲလို အောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လုံးဝ လက်မခံတော့ပါဘူး။ အဲဒီခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ May 20 ရက်နေ့မှာ မိုဟာမက်ကာတွန်းကို ရေးဆွဲဖို့ လှုံ့ဆော် နေပါတယ်။ ကဲဗျာ.. အခုစာဖတ်တဲ့သူက မွတ်ဆလင်ကို ကြောက်လား? မကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့ ပါးစပ်ကြီးနဲ့မပြောပါနဲ့။ လက်တွေ့ပြပါ။ မိုဟာမက်ပုံကို May 20မှာ ဆွဲပြီး picasaweb.google.com မှာတင်ပေးပါ။ (ပုံဆွဲတော်ဖို့မလိုပါ။ သင့်မှာ အခွင့်အရေးရှိကြောင်းပြသဖို့က အဓိကပါ) ကော်မန့်မှာ ကျုပ်တို့ကို အဲဒီလင့်ကိုပေးပါ . . . ကျုပ်တို့ဘလော့မှာ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြန်လည်တင်ပြပေးပါမယ်။ ကျုပ်တို့ကလည်း.. ကျွန်ကုလားများ၏ ခေါင်းဆောင်တမန်တော် မိုဟာမက်ပုံကို ဆွဲပြဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါကြောင်း အစီရင်ခံလိုက်ပါတယ်။ ဒန်..ဒန်..ဒန်။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 12:39 PM